Tadiavo izay hampandroso
"Ary toy izany ihany koa hianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra." - 1 Kôr. 14:12.
Aoka hampianarina mazava ny tanora fa tsy misy asa tena tsara ho tontosa raha tsy misy fisasarana be. Tsy hitondra soa ny faniriana toeram-boninahitra. Ry tanora namako, tsy ho tody eny an-tampon-tendrombohitra ianao raha mijoro fotsiny sy manonofinofy ny ho tonga eny. Ny hany fomba hahatraranao ny tanjonao dia ny fanaovana dingana mifampitohy, mandroso — mety ho miadana angamba saingy mihazona ny fandresena rehetra azo. Ny mpihanika mavitrika sy mitozo no ho tody eny amin'ny tampon-tendrombohitra. Ny tanora tsirairay dia tokony hampiasa amin'ny fahafenoany ny talentany sy hampitombo be indrindra araka izay tratra ny fahafaha-manao ananany. Izay manao izany dia hahatratra ny fenitra ambony indrindra ara-môraly sy ara-tsaina. Saingy ilainy ny manana toe-tsaina be herim-po sy feno fahatapahan-kevitra. Ilainy ny manampina ny sofiny tsy handre ny fiantsoan'ny fahafinaretana; tsy maintsy handà ny fitaomana matetika hataon'ireo namany izy. Tsy maintsy miambina mandrakariva izy andrao dia hivily lalana ka tsy hahatratra ny tanjony.
Avelao tsy ho voavoly ange ny tany dia hitombo eo aminy ny tsilo sy ny ahi-dratsy. Tsy hisy na oviana na oviana voninkazo tsara tarehy hamelana avy amin'ny ahi-dratsy ratsy tarehy sady misy poizina. Ny zava-maniry tsy ilaina dia hiroborobo na tsy karakaraina aza, fa ny masom-boly sarobidy sy kanto dia mitaky fikolokoloana. [...] — RH, 13 Septambra 1881.
Raha tsy tsapan'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fihatsaran'ny toetrany mba hahatonga azy ho olona tsara kokoa isan'andro ka ho afaka hitondra ny adidy izay manandrify azy izy, dia ho isan'izay very izy ireo. — GCB, 20 Martsa 1891.
Mitomboa amin'ny fahasoavana, amin'ny fahatokiana, amin'ny fifehezan-tena. Aoka ho vonona kokoa hiditra ao amin'ny ankohonan'ny mpanjaka any amin'ny lapan'ny lanitra ianao. — Ms 99, 1902.